Kuuriyada Waqooyi 'oo Otto Warmbier ku soo dalacday 2m oo doolar oo lagu daweeyay'
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay Mareykanka ku dalacday 2m oo doolar oo ah qaansheegadka daryeel caafimaad oo loo fidiyay ardaygii Ameerikaanka ahaa ee Otto Warmbier.
Kim Jong-un ayaa sheegay in nabadda gacanka Kuuriya ay gebi ahaanba ku tiirsanaan doonto habdhaqanka mustaqbalka ee Washington.
Warbaahinta qaranka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in Kim-Jong-un uu mar dhaw u socdaalayo dalka Ruushka si uu kulankiisii ugu horreeyay ula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa faahfaahin kooban bixisay, balse waxay sheegtay in hubkan cusub ay ku xiran yihiin "madaxyo gantaallo oo awood badan".
18 Abriil 2019
Kim: Wadahadallo furan ayaan diyaar u ahay haddii 'Mareykanka uu wax beddelo qaabka wadahadalka'
Hoggaamiyaha Kuriyada Waqooyi ayaa sheegay in wadahadal seddexaad oo uu la yeesho Trump ay suuragal tahay haddii uu Mareykanka beddelo aragtidiisa ku aaddan wadahadalka.
Piyongyang waxay ku baaqday in baaritaan dheeraad ah la sameeyo, iyada oo sheegtay iney FBI ku tuhmeyso iney weerarkaasi ku lug leedahay.
31 Maarso 2019
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Mdaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un ugu baaqay inuu hubka Niyuukilarka uu dalkiisu leeyahay inuu ku soo wareejiyo.
Kim ayaa lagu wadaa in uu dhawaan si rasmi ah u kala caddeeyo moowqifkiisa kama dambeyska ah sida ay sheegtay wasiirka.
15 Maarso 2019
Hogaamiyeyaal mar cadaw isku ahaa haddana saaxiibo noqday
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka dagay dalka Vietnam, isaga oo ka qayb galaya shir uu la leeyahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
26 Febraayo 2019
Donald Trump: "Kuuriyada Waqooyi Waxay noqon kartaa mid kamid ah dalalka ugu awoodda badan dunida"
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa in Kuuriyada Waqooyi ay noqon karto mid kamid ah dalalka "ugu awoodda badan dunida dhanka dhaqaalaha" haddii ay faraha ka qaaddo hubkeeda nuclear-ka.
Trump oo hadal lala yaabay ku yiri sirddoonka dalka Mareykanka
Weerarka afka ah ee uu ku qaaday sirddoonka dalkaasi ayaa imaanaya xilli ay sheegeen in Iiraan aysan ku guda jirin sameynta Nukliyerka
31 Jannaayo 2019
Kuuriyada Waqooyi oo cambaareysay cunaqabateyn cusub oo uu Trump ku soo rogay
Kuuriyada Waqooyi ayaa cambaareysay maamulka madaxwayne Trump oo cunaqabatayn cusub ku soo rogay .
17 Disembar 2018
Haweenka Kuuriyada Waqooyi oo tacaddiyo galmo loo geysto
Ha'yadda Human Rights Watch waxay sheegtay in tacaddiyada galmada ah ee lagu hayo haweenka ku nool dalka Kuuriyada Waqooyi ay noqotay mid caadi ah oo maalin kasta la gaysto, haween kasoo baxsaday tacaddiyada ayaa dadka u ololeeya xuquuqda haweenka u sheegay in dhibaatadan ay gaystaan rag xilal ka hayo dowladda Kuuriyada Waqooyi kuwaaso aanan wax ciqaab ah la marsiinin.
Madaxda labada Kuuriya oo markii ugu horreysay ku kulmaya Pyongyang
Madaxwayne dalka Kuuriyada Koonfurta Moon Jae-in, ayaa xaqiijiyay in hogaamiyayaasha sarsare ee ganacsiga ay raaci doonaan marka uu kulanka la yeelanayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
16 Sebtembar 2018
Labada Kuuriya oo furtay xafiis gaar ah oo 24 saac ka shaqayn doono xiriirka labada dal
Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa furtay xafiis ka shaqayn doono xiriirka labada dal isla markaasna uu xiriirka ka dhigi doono mid joogta ah.
Kim Jong-un oo kulan ku casuumay madaxweyne Trump
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un, ayaa warqad u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo ka codsaday kulan daba socda kulankoodii hore ee taariikhiga ahaa, sida uu sheegay aqalka cad.
11 Sebtembar 2018
Dalka Kuuriyada Waqooyi oo midaynaysa qoysas 60 sano kala maqnaa
Dad u dhashay Kuuriyada Koonfureed oo da'doodu tahay 89 sano ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi si ay u soo arkaan qaraabadooda oo aysan arag tan iyo markii uu billawday dagaalkii Kuuriya ee socday 1950-1953.
20 Agoosto 2018
Kuuriyada Waqooyi : Maraykanka sidaan ugu lisnay nooguma hambayn
Kuuriyada waqooyi ayaa mar kale si kulul ugu dhaliishay Mareykanka in uusan wali qaadin cuna-qabateynta saaran dalkaas.
10 Agoosto 2018
QM: Kuuriyada Waqooyi waxay sii waddaa barnaamijka nukliyerka
Warbixin ay soo saareen golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay sii waddo horumarinta barnaamijkeeda nukliyerka islamarkaasna aysan joojin.
4 Agoosto 2018